နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ: သံတမန်တို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ
မှတ်ချက်။ ။ အန်ကယ်ဦးရဲမြင့်မှ ပေးပို့သည်ကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။ ကိုပခန်း
သံတမန် နက္ခတ္တပညာရှင် တစ်ဦးနှင့် စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း
တစ်နေ့သ၌ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ သံတမန်တစ်ဦး၏ နေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်း မြက်ခင်းပြင်၌ ပြုလုပ်သော အေးချမ်းသည့် ဆောင်းကာလ ညစာစားပွဲတစ်ခုတွင် ဧည့်ခံသူအိမ်ရှင်က ကျွန်ုပ်အား ၄င်းတို့ဝန်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစားဝါရင့် သံတမန်အရှာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည့် Mr. M.S. Mehta ဆိုသူနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလေသည်။ ဘူဖေးမစားမီဝိုင်းဖွဲ့သည့် မတ်တပ်ရပ်စကားဝိုင်းအတွင်း ၄င်းနှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံရုံးမှသံမှုးနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန်တို့လည်း ရှိနေကြပြီး ဆူနာမီပင်လယ် ငလျင်လှိုင်းအကြောင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အသက်ဆုံးရှုံးရမှုများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြရာ ထိုင်းသံမှုးက ၄င်းတို့နိုင်ငံ၌ မိုးရွာခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းစသည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များကို နက္ခတ္တပညာရှင်များက ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်တတ်ပြီး၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဌာနမှ ရာသီဥတုခန့်မှန်းသည့် ပညာရှင်များပင်လျှင် ရိုးရာရာသီဥတုခန့်မှန်းပုံနည်းစနစ်များနှင့် နက္ခတ္တပညာရပ်ဖြင့် ခန့်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်လေ့လာဆည်းပူးခြင်းများ၊ သုတေသနပြုလုပ်နေကြကြောင်းဖြင့် ပြောကြားလေ၏။
ချမ်းအေးလှသည့် ဒီဇင်ဘာလဆန်းညချမ်းတွင် ခြံတွင်းထွန်းညှိပေးထားသည့် အနွေးပေးမီးတိုင်ကြီးများ၏ နွေးထွေးသော အပူငွေ့နှင့် ရှတတ စပျစ်ဝိုင်တန်ခိုးကြောင့် စကားအပြောအဆို ပိုမိုသွက်လာကြသည်။ ထိုင်းသံမှုး၏ ထိုင်းနိုင်ငံမိုးလေ၀သက နက္ခတ္တပညာကို မိုးလေ၀သရာသီဥတုခန့်မှန်းခြင်း၊ ရေလွှမ်းခြင်းနှင့် မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တို့အား ခန့်မှန်းရာတွင် လက်တွေ့အသုံးချ သုတေသနပြုနေကြောင်းသတင်းကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ကြပြီးနောက် ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန်၏ ပြောကြားချက်ကို အာရုံရောက်သွားကြရပြန်လေ၏။
၄င်းက ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဆူမားထရာကျွန်းအနီးမှ စတင်ခဲ့သော ဆူနာမီပင်လယ်ရေအောက် ငလျင်ကြီးမလှုပ်မီ ၄င်းတို့နိုင်ငံရှိ နက္ခတ္တပညာရှင်တစ်ဦးက ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သူ နိုရိုဒမ်သီဟနု (Former Cambodian King Norodom Sihanouk) အား ဤဒေသအတွင်း အလွန်တရာအင်းအားကြီးမားသော သဘာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားရန်ရှိနေသော်လည်း ထိုဘေးမှလွတ်ကင်းအောင် အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားသဖြင့် ၄င်းအကြံပြုချက်အတိုင်း သီဟာနုနှင့်မိဖုရားတို့က ယုံယုံကြည်ကြည် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဖြင့် သီဟာနု ကိုယ်တိုင်၎င်း၏ www.norodomsihanouk.info webside ၌ ရေးသားဖေါ်ပြထားပြီး ၂၀၀၅ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့ ရိုက်တာသတင်းတွင်လည်း ယင်းအကြောင်းကို Oddly Enough – Reuters ရိုက်တာသတင်း အခန်းကဏ္ဍတွင် Cambodia Saved from Tsunami by Astrologer? သတင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ကြောင်း၊ သီဟာနုနှင့် မိဖုရားတို့က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် ယင်းဘေးဒုက္ခကပ်ဆိုးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှား၊ သိရိလင်္ကာ၊ ထိုင်းနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် လူအသေအပျောက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည့်အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်ခဲ့ကြရကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့ကြပြီး ထိုနိုင်ငံများမှ ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် တစ်နိုင်ငံလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်းငါးထောင်စီ လှူတန်းခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းတို့နိုင်ငံတွင် နက္ခတ္တပညာရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍမှအရေးပါလှကြောင်း၊ ရှေးရိုးရာအရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကပ်ဆိုးကြီးများကို နက္ခတ္တပညာဖြင့် ကြိုတင်သိရှိခန့်မှန်းနိုင်သည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဟု နားလည်မိပါကြောင်းဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကားပြောကြားပြန်လေ၏။
ကျွန်ုပ်လည်း မနေသာတော့ပဲ မြန်မာတို့၏ (၁၂)လ ရာသီခွင်ကို နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ဥတုကြီး သုံးပါးအား လေးလစီပိုင်းခြားထားပုံနှင့် အပူအအေးကွဲပြားမှုကြောင့် နှစ်လလျှင် ရတုနှစ်ခု၊ တစ်နှစ်တွင် ရတု ခြောက်ခုထားရှိပုံနှင့် (၁၂)ရာသီခွင်ကို နက္ခတ် ၂၇ လုံးဖြင့် စိတ်ဖြာလျှက် ရာသီနက္ခတ်ကို ဂြိုဟ်စီးဂြိုဟ်နင်းဖြင့် ချိန်ထိုးကာ မိုးလေ၀သ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ခန့်မှန်းသည့် ရှေးမြန်မာ့ရိုးရာ နည်းပညာဖြင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းဟောပြောချက်များ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျှက်ရှိရာ မိုးလေ၀သနှင့် ရာသီဥတုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအလုပ်သည် ပဓာနကျလှကြောင်း၊ မြန်မာ့နက္ခတ္တပညာရှင်များသည်လည်း ကြိုတင်ဟောကိန်းများထုတ်တတ်ကြသော်လည်း သတင်းတွင် ဖေါ်ပြလေ့မရှိသဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့မသိကြတာဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ဖြစ်ရပ် (9/11 Incident) အပေါ်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သော နက္ခတ္တပညာရှင်အကြောင်းအား ပြည်တွင်း ဝေဒမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ရာ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖြစ်ရပ်ပါနိုင်ငံက ဗီဇာထုတ်ပေးပြီး အလည်အပတ်သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ကြားသိရကြောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း အားကျမခံပါ မြန်မာဝေဒပညာရှင်များအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်ရလေတော့၏။
ဤသို့ တစ်ယောက်တစ်လှည့် နက္ခတ္တဗေဒအကြောင်း ခပ်ကြွားကြွားလေး လေပစ်နေတုံးမှာ အိမ်ရှင်က ကျွန်ုပ်ကို မကြာမီကလေးမှ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည့် Mr. M.S. Mrhta ကတော့ တစ်ချိန်လုံး ပြုံးပြုံးကလေး ဆိတ်ငြိမ်စွာ နားထောင်ခေါင်းငြိမ့်နေခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုပဲ ဝေဒပညာရပ် (Vedic Astrology) ကိုကောင်းစွာ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေရှိနေကြတာမို့ အခုလို ကြိုတင်တွက်ချက်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တာကို ယုံမှားသံသယရှိစရာမလိုကြောင်း၊ မကြာသေးမီကာလကပင် မြန်မာဝေဒပညာရှင်အချို့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံဝေဒအဖွဲ့က ၄င်းတို့ရေးသားပြုစုထားသော စာတမ်းများကို ဖတ်ကြားစိစစ်လျှက် ဝေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့များနှင့် ဆရာအဆင့်ရှိသူများကို ပီအိပ်ခ်ျဒီ (PhD) ဒေါက်တာဘွဲ့များကို ပေးအပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ကြားသိလိုက်ရကြောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်ပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့လေ၏။ မှတ်ချက်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်ါသည် ထိုသို့မြန်မာနက္ခတ္တပညာရှင်များ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဝေဒပညာရပ်များ လေ့လာဆည်းပူးကာ စာတမ်းများပေးပို့တင်ပြခဲ့ခြင်းကို လုံးဝမသိလိုက်ပါ။ ယခုညစာစားပွဲရောက်မှသာ သိရခြင်းဖြစ်၏။ ပသို့ဆိုစေ ကောင်းသောအနေအထားမို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါ၏။
မြန်မာနက္ခတ္တပညာရှင်များအကြောင်း ပြောဆိုနေကြစဉ် အိမ်ရှင်ညွှန်ကြားရေးမှုးရောက်လာပြီး ၀င်ရောက်နားထောင်နေရာ ခဏကြာတော့ ၄င်းက ကျွန်ုပ်၏ရုံးခန်းသို့ လာရောက်ခဲ့တုံးက ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုလက်စ G.S. Agarwal ရေးသားသည့် Practical Vedic Astrologu နှင့် Dr. Dennis M. Harness ရေးသားသော Nakshatras စာအုပ်များအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုစဉ်တုံးကတည်းက ကျွန်ုပ်ကို ၄င်းတို့ပြည်ပရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနမှ အငြိမ်းစားဝါရင့်သံတမန်အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည့်ပြင် နက္ခတ္တပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Mr. M.S. Mehta နှင့် မိတ်ဆက်ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း၊ မစ္စတာမီတာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံဝေဒအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် Bhartiya Vidhya Bhawan နှင့် Vedic Heritage တို့တွင် ဦးဆောင်မှု အခန်းမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပြီး ဝေဒစာအုပ်အများအပြား ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ရာ ယင်းတို့အနက် Planets And Travel Abroad စာအုပ်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းများအတွက် အသုံးဝင်မည့်စာအုပ်ဖြစ်သည့်ပြင် အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြနေသော ဝေဒဘာသာရပ်ဖြစ်ရာ နက္ခတ္တပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားတစားရှိသည့် ကျွန်ုပ်အတွက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် အကျိုးဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောလေ၏။ ထိုအခိုက်အတန့်မှာပင် ကျွန်ုပ်၏အသိတရားတွင် မေ့လျော့နေသော ကွင်းဆက်ကလေးများပေါ်လာပြီး မစ္စတာမီတာထံချဉ်းကပ်လျှက် ဝေဒပညာရပ်များ ဆည်းပူးလေ့လာရန် လမ်းညွှန်ချက်များကို တောင်းခံရန်ကို သတိရမိတော့၏။ ရသည့်အခွင့်အရေး လက်မလွှတ်ပဲ ၄င်းထံကျွန်ုပ်၏ Visiting Card ကိုပေးရင်း၎င်း၏ ကဒ်ကိုလည်း မှတ်မှတ်သားသားရယူခဲ့၏။
ကံအားလျော်စွာ ၄င်းနေအိမ်မှာ ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာအိမ်နှင့် မဝေးလှသော နေရာတွင်တည်ရှိနေခြင်းအတွက်ကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်သည်မစ္စတာမီတာဂျီးထံ အခါအခွင့်သင့်သလို သွားရောက်လည်ပတ်ကာ သိလိုသမျှမေးမြန်းလျှက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုကို ထင်ဟပ်ဖေါ်ပြနေသည့် နက်နဲ့လှသိမ်မွေ့လှသော ဝေဒပညာရပ်ကို ဆည်းပူးခွင့်ရယူနိုင်ခဲ့ပေတော့၏။ (နာမည်အဆုံးတွင် ဂျီး တပ်၍ ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းအရ ရိုသေလေးစားထိုက်သူကို ဂါရ၀ပြုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်လေ၏။) မီတာဂျီးက ကျွန်ုပ်ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ထမ်းများအတွက် အသုံးတည့်မည့် ၄င်း၏ အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံလျှက်ရေးသားဖေါ်ပြထားသော Planets And Travel Abroad စာအုပ်ကို အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့လေရာ ကျွန်ုပ်ဘ၀တွင် ပထမဦးဆုံးကြိမ်အဖြစ် ထိုကဲ့သို့ စာအုပ်မျိုးနှင့် ပညာရပ်များကို စတင်လေ့လာခွင့်ရခဲ့လေတော့၏။
သံတမန်တစ်ဦးဖြစ်လာပြီဆိုလျင်တော့ (၁) နိုင်ငံခြားကို ဘယ်တော့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာလဲ (၂) မိသားစုလိုက်လို့ အဆင်ပြေမှာလား (၃) ဘယ်နိုင်ငံသွားရမှာလဲ (၄) ကလေးတွေပညာရေးကောင်းကောင်းသင်လို့ရမှာလား (၅) အခုအပြောင်းအရွှေ့က အကျိုးပေးမှာလား (၆) သံရုံးမှာအဆင်ပြေမှာလား (၇) ပညာတော်သင်သွားခွင့်ရမှာလား စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် သိလိုကြသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်လေ၏။ ကျွန်ုပ်သံတမန်ပေါက်စဘ၀ကလည်း ဒီအကြောင်းတွေကို ဖြစ်နိုင်လျှင် ကြိုတင်သိလိုခဲ့သော်လည်း ဗေဒင်ဆရာများကို အထင်သေးခြင်းနှင့် နက္ခတ္တပညာရပ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့စဉ်ကာလမို့ ကြိုတင်သိခွင့်လည်း ဘာမျှမရှိခဲ့ရပါ။ ယခုဂုရုကြီး မစ္စတာမီတာကျွန်ုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်သော စာအုပ်တွင် ထိုအချက်အားလုံး ပါဝင်လေ၏။ မည်သည့် ဟောကြားချက်မဆို ရာနှုန်းပြည့်မှန်မည်ဆိုသော အာမခံချက်မရှိသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းချက်များ ရရှိခြင်းဖြင့် ကြိုတင်စဉ်းစား ချင့်ချိန်လျှက် ပြင်ဆင်သင့်သည်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းသည် နက္ခတ္တပညာရပ်အား လက်တွေ့အသုံးချခြင်းမည်ပေသည်။ ပညာရပ်တစ်ခုကို မလေ့လာပဲ အထင်အမြင်သေး ပစ်ပယ်ပြောကြားခြင်းသည် မှားယွင်းသော အပြုအမူဖြစ်ကြောင်းကို လက်တွေ့ဘ၀ သင်ခန်းစာတစ်ခုအဖြစ်လည်း ရခဲ့ပါ၏။
သံတမန်တို့ လေ့လာသင့်သည်ဆိုသော ကပ္ပဝေဒင်္ဂ (Mundane Astrology) ပညာ
ကျွန်ုပ်သည် မစ္စတာမီတာထံ အခွင့်သင့်သလိုသွားရောက်ခဲ့ရင်း ၄င်းဘ၀တစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် သံတမန်အတွေ့အကြုံများသာမက ဝေဒပညာရပ်နှင့် ပတ်သတ်သော ဆွေးနွေးနာယူမှုများမှာ Mundane Astrology ခေါ် ကပ္ပဝေဒင်္ဂ သံဟိတ အဟောဘာသာရပ်သည် တိုင်းပြည်များ၊ လူမျိုးများ၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ၊ စစ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးကြီးများကို ဟောကြားသည့် ကျယ်ဝန်းနက်နဲ့လှသည့် နက္ခတ္တဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကို သိခွင့်ရခဲ့သည့်အပြင် ၄င်းသည် ထိုဘာသာရပ်ကို အထူးပြုစာတမ်း ရေးသားတင်သွင်းခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်ကိုလည်း သိလိုက်ရလေ၏။ ၄င်း၏ အဆိုအရ ဤဘာသာရပ်သည် ရှေးအခါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နန်းတွင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစား လေ့လာခဲ့သည့်ပြင် တတ်ကျွမ်းသည့်ပညာရှင်များကိုလည်း ဘုရင့်အနားတွင် မင်းတိုင်ပင်အမတ်ကြီးများအဖြစ် ထားလေ့ရှိသည်ဟုဆို၏။ ကောင်းကင်နက္ခတ်ကို လက်တွေ့ကြည့်ရှုတတ်မြောက်ရန်လည်း လိုအပ်မည်ဟု သိရပြန်၏။ ခက်ခဲနက်နဲသောကျမ်းများကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းလာသည်များရှိကြသဖြင့် ၄င်းတို့၏ စည်းစနစ်ကို တအံတသြရှိခဲ့ရပြန်၏။ သို့နှင့် ကျွန်ုပ်သည် Jain M. C. ရေးသားသည့် Mundane Astrology စာအုပ်ကို ၄င်းထံမှ ငှားရမ်းဖတ်ရှုခဲ့ပြီး ၄င်း၏ ထောက်ခံချက်အရ Luthra J.C ရေးသားသော Practical Mundane Astrology Basic Principle စာအုပ်ကိုမူ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာဖတ်ရှုရန် ၀ယ်ယူခဲ့ဖြစ်လေတော့၏။ နားမလည်သော အကြောင်းအချက်အလက်များကို ရှိလာသောအခါ မစ္စတာမီတာဂျီးထံကို အားကိုးတကြီးမေးရလေ့ရှိ၏။ သို့သော် ကံတရားအလိုကျအတိုင်း တစ်နေ့တော့ ၄င်းက နယူယောက်မြို့၌ ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှု ဝေဒသမိုင်းဆိုင်ရာ စာတမ်းပြုစုရေးကိစ္စနှင့် သွားရောက်နေထိုင်လေခဲ့ရာ သူနှင့်ကျွန်ုပ် မထင်မှတ်ဘဲ ဝေးကွာခဲ့ရပြန်၏။ အီးမေးလ်နှင့်တော့ အဆက်အသွယ်ရှိနေခဲ့ပါ၏။ ၄င်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို လက်ရှိဂြိုဟ်အနေအထားများဖြင့် တွက်ချက်သုံးသပ်လေ့လာပုံများကိုလည်း ရှင်းလင်းရင်း အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အချက်အလက်များပေးပို့ သင်ကြားပေးခဲ့၏။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မလေ့လာဘူးသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်နေသဖြင့် စိတ်ဝင်တစားမှတ်သားမိခဲ့ပါ၏။
ထိုအခြေအနေ၌ ကံဇာတ်ဆရာက ကျွန်ုပ်အား နယူဒေလီတွင် သံတမန်အများစု ဆေးကုသခံယူလေ့ရှိသည့် Apollo Hospital ၌ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒ (Medical Astrology) ဘာသာရပ်ကို အထူးပြုလေ့လာကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့တွင်ပါ ကျော်ကြားလူသိများလှသည့် Essential Medical Astrology နှင့် Subtleties of Medical Astrology စာအုပ်များကို ရေးသားသူ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အထူးကုခွဲစိပ်ပါရဂူ M.S. (Surgery), F.R.C.S (UK) ဘွဲ့ရ Dr. K.S. Charak အား တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင် ဖန်တီးခဲ့ပြန်လေ၏။ ၄င်းအား ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်သူက မိတ်ဆက်ပေးရာမှ သိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရပြီး၊ ယခုအခါ အပိုလိုဆေးရုံကြီးတွင် လူနာများ၏ မွေးနေ့ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ရောဂါအခြေအနေများကို ၄င်းတို့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ လိုက်လံကောက်ယူပြီး သုတေသနပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်းလည်း သိရ၏။
ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်က နယူဒေလီမြို့ရှိ WHO အဖွဲ့မှ မြန်မာဆရာဝန်အုပ်စုနှင့် Stag Party တွင်ဆုံဆည်းခဲ့ချိန်၌ ဖေါက်သည်ချပြောပြခဲ့လေရာ ဆရာဝန်တစ်ဦးက Medical Astrology ဆိုတာ ယခုမှပင်ကြားဘူးကြောင်း ဆိုလေသဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း Dr. K.S. Charak ၏ ဆေးပညာဆိုင်ရာ နက္ခတ္တအမြင်ကို နားလည်ရခက်နေမိတော့၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေကိုးရီးယား သံမှုးအား Dr. Charak က နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖြင့် ၄င်းတို့ သံရုံးတွင် ပြုလုပ်သော ဧည့်ခံပွဲ၌ ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ရာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ အမှန်တကယ်ပင် ဟောကြားပြီး (၂) လခန့်အကြာ နှလုံးသွေးကြောအတွင်း Medicated Stant နှစ်ချောင်းထည့်ခဲ့ရကြောင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ထိုသံမှုးမှ ပြောပြလေ၏။ ထိုအခါမှ ကျွန်ုပ်လည်း မနေသာတော့ပဲ ဒေါက်တာ ချာရပ်ခ်ထံ ဖုံးဆက်ပြီး ၄င်းရေးသားသော Medical Astrology စာအုပ်များကို ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရမလဲဟု မေးမြန်းခဲ့မိရာ ဆရာဝန်ကြီးက ရယ်ရယ်မောမောဖြင့် Apollo Hospital သို့လာရောက်သည့်အခါ ယူလာပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားကာ ကျွန်ုပ်အားရက်ချိန်းပေးလိုက်လေ၏။
၄င်းက ကျွန်ုပ်နှင့် တွေ့ဆုံသည့်အခါ စာအုပ်များပေးအပ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားတူ ဆေးပညာဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒရှိပါသလားဟု မေးမြန်းသဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးနှင့် နက္ခတ်ဆက်စပ်မှုကို ရေးသားထားသော စာအုပ်များ ရှာဖွေပေးပို့ပေးရန်မှာလိုက်၏။ သားကြီး၏ ကျေးဇူးဖြင့် ကျွန်ုပ်လက်ဝယ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး ဆရာများလေ့လာနာယသင်ကြားရသော နက္ခတ္တဗေဒနယ ခေါ် မြန်မာ့နက္ခတ်ဆေးပညာကျမ်းကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်မိလာ၏။ သည့်နောက်တော့ အပူအအေးကို အဓိကထားသော အယုဗေဒခေါ် ဘေသဇ္ဇနယဆေးပညာ အကြောင်းပါဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီး၊ Dr. K.S. Charak နှင့် မိတ်ဆွေ သံတမန်အချို့ကို နေအိမ်တွင် ထမင်းစားဖိတ်ကြွေးရင်း ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုလေ့လာမိသမျှကို ပြန်လည်ဖေါက်သည်ချကာ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာတွင် ဆေးပေးရာ၌ နက္ခတ်ဖြင့်ဆက်စပ်စဉ်းစားပုံကို အာဘောင်အာရင်းသံသံ ပြောခဲ့မိပြန်၏။ မလေးရှားသံမှုးကတော်နှင့် အတူရောက်လာသော ကျွန်ုပ်ဇနီးသည်နှင့် မျက်လုံးချင်းဆုံမိတော့မှ လျှာဘရိတ်အုပ်လိုက်ရ၏။
မလေးရှားသံမှုးက ၄င်းတို့နိုင်ငံတွင် နက္ခတ်ပညာရှင်စစ်စစ်ရှားပါးပြီး အကြားအမြင်နှင့် နတ်မေးသူများသာ များပြားနေကြောင်း၊ ၄င်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မလေးရှားနိုင်ငံသံရုံးတွင် ၃ နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးရာ ၄င်းအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရှိကြောင်း မြန်မာနက္ခတ်ဆရာတစ်ဦးက ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည့်ပြင် အစာအိမ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ရောဂါခံစားရနိုင်ကြောင်းနှင့် ဘယ်ဖက်မျက်စိခွဲစိပ်ခံရမည်ကိုလည်း လပိုင်းအထိ မှန်ကန်အောင်ဟောပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုလေ၏။ ထိုအခါ ကိုရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ထိုင်းသံတမန်များကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ နက္ခတ်ပညာရှင်များကို တွေ့ခွင့်ရလျှင် သိတ်ကောင်းမှာပဲဟု ပြောကြပြန်လေရာ၊ မလေးရှားသံမှုးက ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံသံရုံးဝန်ထမ်းအများစုသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် မြန်မာနက္ခတ်ပညာရှင်များကို ကောင်းစွာသိရှိလေ့ရှိကြကြောင်းဖြင့် ပြောပြလေ၏။ ကျွန်ုပ်လည်း မိမိသိသမျှ မြန်မာနက္ခတ်ပညာရှင်အချို့အကြောင်းကို ဖြည့်စွက်ပြောကြားရင်း သံတမန်တို့၏ လူသားသဘာဝအလျှောက် အနာဂတ်သိမြင်လိုသော သဘောသဘာဝနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် နက္ခတ္တဗေဒဘာသာရပ်အကြောင်းကို စဉ်းစားတွေးတောရင်း
“ငွေသော်တာ၊ ယုန်မင်းတို့၊ တစ်ခွင်ချင်းယှဉ်လာ၊ ထင်အလင်းမြင်ပါလျှင်၊ ယဉ်ကညာနွဲ့နှောင်း၊ စန်းနှစ်ပွင့်တန်ခိုးသန်တယ်၊ အမျိုးမှန်ရလိမ့်စုတ်ကောင်း၊ ရွှေငွေမြရတနာ၊ ခါမကြာမနှောင်း၊ ဆုပဏ္ဏာလာဘ်ကောင်းနှင့်၊ ထပ်လောင်းဆင့်တန်ဆာ၊ ရလိမ့်မည် သွေမဆုတ်သာပ၊ ဧက၀ုစ်ဟောသင့်လှပါ၊ မြိန်သြဇာအရသာမှာ၊ ထူးထွေစွာတစ်ပုံတင့်ပါလိမ့်၊ ယုန်နှစ်ပွင့်စန်းသော်တာ၊ ထွန်းသည့်ခါ၊ သွေမပျက် ငွေစက်ညှာကို၊ ရွှေမျက်နှာပွင့်ပါလိမ့်လေး”
ဟူသော မွေးဇာတာမူလစန်း(တနင်္လာဂြိုဟ်) အပေါ် လက်ရှိ ကောင်းကင်ရှိ ကောဇာစန်းစီးနင်းခိုက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံတတ်ကြောင်း မြန်မာတို့၏ ရိုရာနက္ခတ်တေးထပ်တစ်ပုဒ်ကို စိတ်အတွင်းမှ ရေရွတ်မိကာ ငွေလရောင်လွှမ်းနေသည့် သံတမန် ညစာစားပွဲညတစ်ည၏ အေးချမ်းသာယာမှုအရသာကို ကြည်နူးခံစားနေမိတော့၏။
မှတ်ချက်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သားကောင်းတမန်နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
အင်မတန် ဗဟုသုတရတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ပါဗျာ၊ ဒီအတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးတဲ့ ဆရာ ဦးရဲမြင့်အားလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ..